Nzira yekutevera kudya kweplamu yekuderedza uremu | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Ungatevedzera sei kudya kweplamu yekudzikisira uremu
Mukudonha, imwe yezvakakurumbira chikafu chinonzi plum. Kukohwa kwakapfuma kwemapuru akaibva uye ane hutano anokubvumira kuti ushandise michero kutevedzera kudya kwakasiyana: nekukurumidza, kureba, mono-kudya kana kusanganiswa.
Plum Diet: Zvakanakira
Kurera huremu pane plum chikafu kunonyanya kukonzerwa nekucheneswa kwesimba kwematumbu uye basa rinoshanda rechitya chekugaya.
Plums - michero inonaka, zvinoreva kuti kudya kwacho kuchaunza mufaro. Zvibereko hazvizobatsira kwete chete kuderedza uremu, asiwo kunopa muviri muviri nevhitamini E, A, C, boka B uye microelements akadai zinc, mhangura, simbi, potasiamu, iodine, nezvimwewo.
Ese marudzi eplum akapfuma mu pectin, ayo anovandudza matumbo patency uye peristalsis. Pasi pesimba rechinhu chinobatsira, dhayeti inoderedza huwandu hwe cholesterol, metabolism inomiswa, hutano nekutaridzika huvandudzika.
Masayendisiti anopikisa kuti michero iyi, kunyanya kana yadyiwa nemapundu, inodzivirira maseru emukenza kuti asakura
Shanduro yekutanga ye plum chikafu: pa 3 yezuva
Iyo ine mukudya kwemazuva matatu pa1 kg yemaplamu matsva emarudzi akasviba zuva nezuva. Pamwe neaplamu, iwe unogona kudya yakaderera-mafuta kanyini chekeche, kumwa yakaderera-mafuta kefir, mineral mvura, green green uye yakajeka mvura.
Dine inofanira kunge iri yemiriwo soups nehuwandu hushoma hwemunyu. Chingwa chinogona kunge chakasviba kana kubva pane upfu hwezviyo zvese (hapana anodarika 200 gr pazuva). Oat uye buckwheat zviyo pamvura, yakabikwa huku (isina anopfuura 150 gr pazuva), 1 zai pakudya kwekuseni kana masikati emakoto zvakare inobvumidzwa.
Kubatira miriwo minyoro uye ma greens zvinoratidzirwawo - pane imwe neimwe yekudya mu150-200 gr.
Pasi pekurambidzwa, doro, chingwa chena, nyama, nyama broths, mbatatisi uye chero ipi neipi yepamusoro-calorie ndiro, pamwe neshuga uye maswiti.
Nenheyo idzi dzezveutano, plummet inogona kusvika ku1-2 kg mumazuva matatu ekudya kweplamu. Asi chinhu chikuru ndechekuti detoxization yematumbu ichaitika, iyo inokanganisa hutano, mamiriro eganda, kuita (zvese zvichabudirira!).
Iyo yechipiri vhezheni yeplum yekudya - iyo nguva ye7-10 mazuva
Nenzira iyi, iwe unogona kusanganisira chero zvigadzirwa mumenyu kunze kweizvo zvinotevera:
chena hupfu hwakatsetseka uye nechingwa chena;
nyama ine mafuta uye zvese zvikafu zvine mafuta;
doro, zvinwiwa zvinotapira;
chero zvikafu zvakakangwa;
chikafu chakareruka uye chikafu chinokurumidza;
yakakwira mafuta mukaka zvigadzirwa.
Mashandisiro aungaita slimming plums
Mune iyi embodiment, iyo dhure yakadaro haizovi pane iyo menyu. Inokurudzirwa kushandisa sosi nyowani yakagadzirirwa kubva kune michero ine hutano. Iwe unofanirwa kuinwa iyo mukapu (200-220 ml) usati wadya, usati wadya.
Zviri zvakanaka kuomerera pakudya kwakadaro kwenguva yakareba kupfuura mazuva gumi. Nekudaro, iyo yechipiri sarudzo inongogumira pakuwanikwa kwemwaka wemichero. Yakatsemurwa jusi, kune iro shuga inowanzo wedzerwa, haina kukodzera. Naizvozvo, pachangosvika chirimwa, ipapo enda pakudya uku. Iye achabvumidza kukanda kusvika pa5-6 kg mumazuva 10-14.
Kuenderana neye plum kudya, kunyanya mumazuva ayo ekutanga, kunogona kuperekedzwa nemipimo. Icho chokwadi ndechekuti plum ine laxative maitiro kumatumbo. Kucheneswa kwayo kunogona kuenderera zvakanyanya zvekuti unofanirwa kuve uri pamba uye usingaisiye kwenguva yakareba. Iyi poindi inofanirwa kuverengerwa.
Dzimwe nguva panguva yekudya kweplamu, vanhu vanonzwa kurwadziwa mudumbu rakadzika, kunzwa kwekurema mudumbu. Muchiitiko ichi, iwe unofanirwa kudzikisa chikamu chemichero kana kukanganisa chikafu zvachose.
Iyo nzira yeplum yekurasikirwa uremu - zvese pamichero mitsva uye pane muto - inopesana neshuga, chirwere chisingaperi chegumbo rekudya, nhumbu uye kuyamwisa.
Usati waisa chikafu cheplamu chekuderedza uremu, bvunza chiremba uye chiremba wezvehutano!
Pineapple tincture yekuremerwa uremu: ongororo. Pineapple Tincture Slimming Recipe
Biomagnets yekuremerwa uremu. Ongororo chaiyo yevanachiremba nezve biomagnets yekuremerwa uremu Nano Slim uye SlimClips
"Vitacline" yekuremerwa uremu: ongororo. Nzira yakanakisa yekudzora uremu
Chirasi mudumbu chekurema kwekurema: kuongorora, mirayiridzo
Posted in mutambo
Mibvunzo ye35 mu database yakagadzirwa mu 6,313 masekondi.